हेलम्बु गाउँपालिकामा चौँरीको नि : शुल्क बीमा — onlinedabali.com
हेलम्बु गाउँपालिकामा चौँरीको नि : शुल्क बीमा
सिन्धुपाल्चोक । हेलम्बु गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण चौँरीको बीमा गरेको छ ।
गाउँपालिकाको यो निर्णयबाट चौँरीपालक किसान उत्साहित भएका छन् । वर्षको ९ महिनाभन्दा बढी समय खर्कमा चौँरी चराउने वडा नं.२ का पेम्बा शेर्पाले चौँरी मर्दा हुने जोखिम कम हुने भएपछि खुशी भए ।
गाउँपालिकाभित्रका फिरन्ते चौँरी गोठलाई लक्षित गर्दै खर्क र गोठमा पालिएका सबै चौँरीको नि : शुल्क बीमा योजना अघि बढाइएको छ । सरकार र किसानको संयुक्त लगानीमा पशु बीमाअन्तर्गत किसानले तिर्नुपर्ने बीमाङ्क गाउँपालिकाले उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।
७५ प्रतिशत सरकारी अनुदान र २५ प्रतिशत किसान स्वयंको लगानीमा बीमा कार्यक्रम छ तर, गाउँपालिकाले किसानलाई चौँरी पालनमा सक्रिय बनाउन उक्त २५ प्रतिशत आफैँ तिर्ने भएपछि किसानलाई नि : शुल्क चौँरी बीमाको अवसर मिलेको हो ।
गाउँपालिकाको निर्णयअनुसार हाल १६ गोठमा रहेका ४ सय बढी चौँरीको नि : शुल्क बीमा गरिएको छ । बीमा कार्यक्रमले चौँरी खरीददेखि पालनमा खर्च गरिएको लगानी सुरक्षित बनाएको छ । १ लाख बढी मूल्य पर्ने चौँरी मर्दा किसानले व्यहोर्नुपर्ने घाटाबाट बीमा कार्यक्रमले मुक्ति मिलेको छ ।
“गोठ सार्दै जाँदा चौँरी बिरामी भएर मर्ने जोखिम हुन्छ, केही गरी मरिहालेमा अब भने बीमा कार्यक्रमले लगानी जोगिनेमा ढुक्क बनायो”, शेर्पाले भने । पशुको मृत्युपछि घाटा व्यहोर्ने हुँदा विस्तारै चौँरीपालनतर्फ किसानको आकर्षण घट्दै गएको थियो ।
चौँरी पकेट क्षेत्र बनाई किसानलाई व्यावसायिक पशुपालक बनाउन बीमा कार्यक्रम नि : शुल्क बनाइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले बताएका छन् ।
मध्यरातबाट बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, कति पुग्यो नयाँ मूल्य ?
सिंगटी हाइड्रोको आईपीओ बिक्री खुला, कहिलेसम्म दिने आवेदन ?
तोलामा पाँच सयले घट्यो सुनको भाउ, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?
ग्रीनलाइफ हाइड्रोपावरको शेयर नेप्सेमा सूचीकृत, कहिलेबाट हुने भयो कारोबार ?
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङलाई हटाउन काँग्रेसको नेतृत्वमा चार पार्टीबीच गठबन्धन
नयाँवर्ष मनाउन सरकारी कर्मचारी बाकेको जीप दुर्घटनाः प्रशासकीय अधिकृतसहित ५ जनाको ज्यान गयो
नयाँ वर्ष २०७८ः विप्वलद्वारा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयको शिलान्यास
आजबाट २०७८ साल सुरु, विविध कार्यक्रम गरी नयाँ वर्ष मनाइँदै
माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठक अन्तिममा स्थगित, समर्थन आज फिर्ता नहुने